Vaovao - Bisikileta aforeto
Efa kilasika komuter, ny bisikileta aforitradia mbola vaovao ihany eo amin'ny sehatry ny bisikileta. Saingy tsy natao ho an'ny mpandeha fotsiny izy ireo izay te ho afaka mivezivezy amin'ny bisy na lamasinina miaraka amin'ny bisikiletany, ary koa mitahiry izany ao ambanin'ny latabany eo am-piasana. Izy ireo koa dia mety ho safidy mahafinaritra ho an'ny olona tsy manana fitehirizana voafetra ao an-trano na izay te-ho afaka hitondra mora foana ny bisikiletany.Bisikileta aforitra mianjera ao anaty habe azo entina mora entina, mety amin'ny fitondrana any ambony, manipy ny valin'ny fiaranao na koa mizaha entana ao anaty fiaramanidina.
Antony iray lehibe amin'ny fisafidianana ny tsara bisikileta aforitraho anao dia haben'ny kodiarana. Amin'ny ankapobeny dia misy habe dimy azo isafidianana, manomboka amin'ny kodiarana 16-inch kely ka hatramin'ny kodiarana 26-inch feno habe. Mazava ho azy fa arakaraka ny hakelezan'ny kodiarana no ahitanao ny bisikiletanao mivalona rehefa mivalona. Noho izany, raha toa ka lafo ny toerana fitahirizana dia safidio ny iray amin'ireo haben'ny kodiarana kely kokoa.
Na izany aza, ny mpitaingina bisikileta sasany dia mahita fa ny kodiarana kely kokoa dia manome traikefa mitaingina kely. Ny kodiarana lehibe kokoa dia hikodiadia eo ambonin'ireo bontsibontsina sy triatra fotsiny. Angamba ny haben'ny kodiarana malaza indrindra amin'ny fampandeferana ny valizy mifangaro miaraka amin'ny traikefa bisikileta mahafinaritra dia ny safidy 20-inch. Ity habe middling ity dia azo entina mora foana nefa tokony hanome fiakarana milamina sy malefaka.
Fotoana fandefasana: Aug-26-2021